Izimpahla ze-China Herbal Tea Lily Esitokisini Ekwenziweni naseFektri | Bestop
Igama lesiShayina: bai he hua
Igama lesiNgisi: Lily
Igama lesiLatin: Lilium
Umsebenzi oyinhloko: Iphaphu elizolisayo, ukuqeda ukukhwehlela, umlilo oqabulayo, ukuthambisa inhliziyo nokutholisa ingqondo
ILilium (igama lesayensi: Lilium) isitshalo esingapheli se-herbaceous bulbous seLiliaceae. Ivela ezifundeni ezinamazinga okushisa acishe afinyelele cishe kuwo wonke amazwekazi enyakatho Nenkabazwe, ikakhulukazi esatshalaliswa empumalanga ye-Asia, eYurophu, eNyakatho Melika, njll. Kunezinhlobo ezingaphezu kwezingu-110 ezitholakala emhlabeni, ezingama-55 zazo zikhiqizwa eChina. Eminyakeni yakamuva, kunezinhlobonhlobo eziningi ezintsha ezikhiqizwa yi-hybridization yokufakelwa, njenge-lily yase-Asia, i-musk lily, i-perfume lily, i-sunflower (fire) lily, uLily njalonjalo. Ukuma okuhle kukaLily, amaqabunga aluhlaza, iziqu nobuhle, kuyisimbali esingavamile ukusika i-rookie. Igama layo lesayensi (Lilium brownii var. Viridulum Baker) yaziwa nangokuthi qiangshu, fanjiu, Shandan, Daoxian, chongmai, Zhongting, Moluo, chongxiang, zhongfenghua, Baihe garlic, master Fu garlic, suannao amazambane, yehehua, njll.
Amaphaphu athambile, ukuqeda ukukhwehlela, ukusula umlilo, ukwehlisa inhliziyo nokuthula kwengqondo.
Isetshenziselwa ukukhwehlela ngenxa yokushoda kwe-yin, igazi ku-sputum, ukushaya kwenhliziyo, ukuqwasha, ukuphupha kanye ne-trance.
1. Iphalishi likaLily:
Izinto zokusetshenziswa: 50g lily powder, 60g japonica irayisi, ushukela.
Ukushintshashintsha kwezwi: qala uhlanze umnduze nelayisi, ukufake ebhodweni, engeza amanzi bese ubila ngokushisa okuphansi. Lapho ilayisi ne-japonica selivuthiwe futhi selibolile, engeza inani elifanele likashukela, futhi ungalidla.
Ilungele ikakhulukazi abantu abaneminyaka ephakathi nendawo nabadala, labo ababuthakathaka futhi abanokuqwasha, umkhuhlane ophansi nokucasuka.
Ngaphezu kwalokho, ukwengeza iTremella kuphalishi likaLily kunomsebenzi oqinile wokondla i-yin namaphaphu okuswakama; Ukungeza ubhontshisi we-mung kungathuthukisa umphumela wokususa ukushisa nokukhipha ubuthi emzimbeni.
Ukushintshashintsha kwezwi: susa ukungcola bese ugeza umnduze, hlanza umnduze kaningi emanzini acwebile, engeza amanzi ebhodweni, uwupheke phezulu uze ubole, bese ufaka inani elifanele likashukela. Isobho likaLily lilungele ukwelashwa kweziguli zesifo sofuba. Yize ibaba kancane uma idliwe, iyababa futhi imnandi uma inambitha ngokucophelela, okwenza abantu bakunambithe. Uma sigcinwe esiqandisini isikhashana, siyisiphuzo esihle kakhulu se-iced.
Imbali yokuqala yegatsha egatsheni le-lily ingavunwa uma inwetshwe ngokuphelele futhi isobala. Uma ivulwa kusenesikhathi, izothinta umbala wembali. Uma sekwephuze kakhulu, ngeke kubangele ubunzima kuphela ekupakisheni, kepha futhi kungcolisa amacembe ngenxa yokukhishwa kwempova.
Ngemuva kokuthi sekuphelelwe amanzi emzimbeni ngokuphelele, singathola itiye le-Lily elaluliwe, elingamanziswa ngqo ngamanzi uma kunesidingo noma lihlanganiswe nezinye izithako.
Langaphambilini Indabuko Yemithi YamaShayina YaseCyathula
Olandelayo: Ikhasi Elisha Elivuniwe LaseKaffir Lime
Itiye le-Herbal Detox
I-Spearmint Tea Yamakhambi